Nhengo dzeparamende dzebato reMDC dzosangana nhasi kuti dzizeye mafambiro e chirongwa
Nhengo dzeparamende dzebato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai dziri muhurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo, dzasangana nhasi pamuzinda webato iri muHarare kuti dzizeye mafambiro ari kuita chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu, uye matambudziko ari kusangana nenhengo dzebato iri.
Bato reMDC riri kunyunyuta kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nevatsigiri vezanu pf, vakarwa hondo yerununguko, pamwe nevasori, izvo zviri kuzotadzisa kuti dzipe pfungwa dzadzo dzakasununguka. Mutungamiri wevakarwa hondo yerusununguko, VaJabulani Sibanda, mumwe wevanhu vari kunzi vari kutungamira mukushungurudzwa kwenhengo dzeMDC.
Tabata mumwe wemasachigaro ecopac vari vem-d-c t, vadouglas mwonzora, kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo.
Sangano re Parliamentary Select Committee munyaya dzekunyorwa kwebumbiro remutemo idzva rinoti richavumba makommittee muma dunhu emunyika achyita basa rekuongororo nyaya dzinekuita nekusawrirana neshungurudza muhurongwe uy.
Mumwe vemsachigaro vekommittee vapaul mangwana vanoti makommittee aya anenge achitungmirwa nevanhu vatatu venenge vachibva mubato matatu, vanenge vachishanda nemapurisa.
Vamangwana varimubato rezanu-pf vanoti mhau dzemhirzonga muhurongwe uyu uri kupomerwa nhengo dzembato iri(it turns out) kuti kumwe kuswirirana kunokodzerwa nezvimwe zvinhu zvisina zvekunyorwa nebumbiro remutemo.
Patience rusere vestudio 7 atanga kubva vamangwana kuti seyi nhengo dzembato ravo varikukodzera mhirizhonga.
Tichiri panyaya iyi, mumiri vezaka central mudare rehouse of assembly, vanoti mangwana pachapera zororo yeheroes vacharamba vakaramwa basa, nekuti mutungamiri ve vevakrwa hondo resununguko, vajabulani sibanda varikamba vachishungurudza vanhu uye madzishe emudunhu uyu varibatsira nhengo dzezanu-pf kuti vashungurudze vanhu.
Vaharrison mudzuri vanotungamirwava nhengo dzecopac mudunhu remamasvingo vanoti kubvira, kwakapisirwa nhengo yemdc yayivuganidza vanhu kuti vaende kumisangano yecopac hapana asungwa uye vasibanda vanonzi varikutrongwa yimwe misangano yekutyikizira vanhu.
Vamudzuri vanoti vatovedzera(zvido zvavo) demand ekuti nemamadzishe ekumasvingo vavakupindira muhurongwe vecopac uye vabiswe munezvekuita nehurongwa uyu.